Oghere Jackets Miami na-ewelite Okpomọkụ - pisklak.net
Oghere Jackets Miami na-ewelite Okpomọkụ
RTG mechara kee egwuregwu jackpot izizi ya na – enweghị ike ịkwụsị ịkpọ ya. Oghere egwuregwu Miami bụ ihe niile ịchọrọ n’egwuregwu – ọtụtụ ohere iji tie nnukwu, gụnyere jackpot, bonus bonus pụrụ iche. Mana, nke mbụ, egwuregwu a na-ekpo ọkụ nke ukwuu maka ụmụ agbọghọ mara mma na-apụta n’azụ.
Miami Jackpots oghere Basics
Nke a 5-esi anwụde oghere na 20 paylines ka atọrọ na Ocean Drive, kacha ewu ewu n’okporo ámá na Miami. Ihe ngosi agbasasị bụ akara ngosi Miami nke na-akwụ ụgwọ mgbe ọ na-egosi ebe ọ bụla na egwuregwu egwuregwu. A na-ebu ụzọ gbasasịa mmeri site na ngụkọta ngụkọta wee tinye ya na mmeri.
Ihe nnọchianya anụ ọhịa na-anọchi akara ndị ọzọ niile ma e wezụga ikposa na akara jackpot.
Oghere a nwere atụmatụ abụọ pụrụ iche nke nwere ike ime ka ohere ịnweta mmeri gị. Ọ bụrụ nakọtara n’etiti abalị atọ na atọ na ọnwa iri ọ bụla na atụ ogho, ị ga – ebute njirimara Jackpot. Ihe akara Jackpot na-akwụ ụgwọ mgbe ha pụtara ebe ọ bụla na bọọdụ egwuregwu. Jackpot Enwee Mmeri na-akpa ọtụtụ site ngụkọta nzọ na mgbe ahụ agbakwunye na akara mmeri.
Njirimara Egwuregwu Free
Nke a bụ ihe ọzọ pụrụ iche daashi gburugburu aha ya bụ Ghọta daashi Njirimara na ọ na-triggered site 3 ikposa akara na ọ kwuo free egwuregwu. Ya bụ, mgbe 3 ikposa akara na-egosi na-esi anwụde 2, 3, na 4 a mma ga-emepe. Nwere ike ịhọrọ otu n’ime nhọrọ 4 ọ bụla ga-egosi n’ihuenyo.
Ọ bụrụ na ahọrọ nhọrọ 1, a na-egwu egwuregwu iri abụọ n’efu na x2 mmeri multiplier. Nhọrọ nke abuo na-eweta 15 free spins na x3 multiplier. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịhọrọ nke atọ, ị ga – enweta 12 free spins na x12 multiplier. Nhọrọ nke anọ na-anapụta 10 free spins na x5 multiplier.
Egwuregwu n’efu na-egwu na nzọ nke na-akpali akpali ma na-enweghị ike ịgbanwe nzọ ahụ. N’oge atụmatụ a, ihe nrite niile na-aba ụba site na onye na – abawanye ụba, ma e wezụga akara Jackpot. Egwuregwu n’efu ga-akwụsị ozugbo enweghị egwuregwu ndị ọzọ na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ mgbe a na-enweta ego kachasị elu. Mgbe egwuregwu niile anaghị akwụ ụgwọ, ọkọlọtọ ga-egosiputa mmeri gị niile enyere n’oge atụmatụ a. Njirimara enweghị ike ịmegharị.
Okpomoku di na ngwa ngwa cha cha chara oke na nnukwu ego. Malite njem njem Miami ma kụọ jackpot ebe a!